20 / 07 / 2021 20 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 418 Views စာ0မှတ်ချက် 7163 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, အုတ်ခဲ, တည်ဆောက်, သီးသန့်တည်ဆောက်ခြင်း, Jedi Bob, Lego, Lego Minifigures, Lego သတင်းလွှာ, Lego Star Wars, LEGO.com, သေးသေးလေး, သတင်းလွှာ, Star Wars
အဆင်သင့်ဖြစ်သော p ကိုရှာဖွေနေသည်artကျွန်တော်တို့ရဲ့ updated ဘို့ s ကိုစာရင်း Lego Star Wars Jedi Bob minifigure? ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာကိုစာရင်းသွင်းပါ။ ၎င်းကိုသင်၏ inbox ထဲသို့တိုက်ရိုက်ပို့ပေးပါမည်။
ကျနော်တို့ပြီးသားဖော်ပြထားပါတယ် အတိအကျအပိုင်းပိုင်း မင်းရဲ့ဒဏ္ediာရီပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ဒဏ္ediာရီပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Jedi Bob ကိုခေတ်မီယူဆုပ်ကိုင်ဖို့လိုလိမ့်မယ် Lego 7163 Republic Gunship တွင်ပထမဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် Group ၏ကိုယ်ပိုင်တီထွင်မှု - ယခုတွင်သူ၌ကိုယ်ပိုင်ရှိသည် Wookieepedia စာမျက်နှာ။ တစ်ခါတစ်လေမှာဘဝဟာမင်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်လာတတ်တယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းသူတို့ကို p လိုချင်ရင်arts များကို BrickLink သို့ upload တင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သောစာရင်းတစ်ခုတွင်စာရင်းပြုစုပြီးဖြစ်သည် Brick Fanatics'ဒီစာမျက်နှာရဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့သတင်းလွှာ (သို့မဟုတ်လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့်ဖတ်လျှင်အောက်ခြေ) ။ အဖြစ် partကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်မှုအားလုံးအတွက်စာရင်းများ၊ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့်သင်ရရှိမည် Lego သင့်ရဲ့စာပုံးထဲသို့အကြောင်းအရာများကိုတိုက်ရိုက်။
အဆိုပါ Jedi Bob p များအတွက်ကန ဦး အီးမေးလ်ပေါက်ကွဲမှုarts စာရင်း (ပိုမိုကွဲပြားခြားနားသောဘော့ဖန်တီးမှုတွင်ပါ ၀ င်သောအရာများပါ ၀ င်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မူလကအဝါရောင်အရေခွံသည်ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးဖြစ်သည်ဟုမည်သူဆိုသနည်း?) သည်ဇူလိုင် ၂၀ ရက်၊ အင်္ဂလန်ည ၃ နာရီတွင်ထွက်သွားလိမ့်မည်။ ဤပုံပြင်ကိုသင်တွေ့ပြီးနောက်တွင်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းခံရပါကစိတ်မပူပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပတ်စဉ်ထုတ်သတင်းများအားလုံးတွင်စာရင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်လင့်ခ်တစ်ခုလည်းပါ ၀ င်ပါမည်။
ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏တည်ဆောက်မှု Jedi Bob ကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုပါ ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်း။ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောပူးတှဲပါ 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunshipစတိုးဆိုင်များနှင့်မှာရောက်လာလိမ့်မည်သည့် LEGO.com သြဂုတ်လ 1 ပေါ်မှာ။
← Lego Star Wars နွေရာသီ 2021 အစုံစင်ပေါ်အပေါ်ပြီးသားဖြစ်ကြသည်
Lego Marvel 76178 Daily Bugle ပြန်လည်သုံးသပ်မှု - ဤသတင်းထောက်ထံမှသတင်းကောင်း မှလွဲ၍ ဘာမျှမရှိပါ →